”Danteenna ayaa ku xiran mana yeelayno!” – Midowga Yurub oo ku kala qaybsamay cunaqabataynta Ruushka (Dildillaac muuqda) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Danteenna ayaa ku xiran mana yeelayno!” – Midowga Yurub oo ku kala...
”Danteenna ayaa ku xiran mana yeelayno!” – Midowga Yurub oo ku kala qaybsamay cunaqabataynta Ruushka (Dildillaac muuqda)
(Hadalsame) 22 Maarso 2022 – Dalka Hungary ayaa si cad u diidey oo ku dooday in uusan taageeri doonin cunaqabateynta dhaqaale ee cusub ee lagu soo rogayo shirkadaha tamarta ee Ruushka, isaga oo ku doodaya in tallabadaasi ay iyaga dib ugu soo noqonayso.
Peter Szijjarto oo ah diblomaasiga ugu sarreeya ee dalkaasi, ayaa sidoo kale ka digay in soo jeedinta aagga duulimaadka ee Ukraine ay dhalinayso halista colaad goboleed wayn.
Isagoo la hadlayay suxufiyiinta kaddib kulan uu Isniintii la yeeshay xubnaha Midowga Yurub ee Brussels, wuxuu Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Hungary sheegay in Budapest aysan u badneyn inay taageerto cunaqabataynnada lala beegsanayo gaaska iyo saliidda Ruushka, maadaama ay keenayaan inay waxyeelleeyaan danahooda gaarka ah.
“Heshiiska cunaqabataynta suurtagalka ah ee EU-da ee ka dhanka ah saadka tamarta Ruushka ama carqaladeyntooda waxay u badan tahay inaan la gaari doonin,”
““Heshiis cunaqabatayneed oo ka yimaada EU-da kana dhan ah saadka tamarta Ruushku wuxuu u badan yahay inaan marna la gaari doonin,” ayuu yiri Wasiirku, isagoo intaa ku daray “in aanay taageeri doonin cunaqabatayn kasta oo khatar gelin karta saadka tamarta ee Hungary.”
”Wadamada qaar ayaa waxay aad ugu tiirsan yihiin sahayda tamarta Ruushka. Taas uma samayno madadaalo. Tamartu maaha su’aal falsafadeed ama fikradeed, laakiin waa mid jireed, ama xisaabeed.” ayuu raaciyey.
Jarmalka oo ah dhaqaalaha ugu xooggan EU ayaa ka mid ah dalalka aan waqti xaadirkan hal maalin noolaan karin gaaska & saliidda Ruushka la’aantood, iyadoo guud ahaan ay EU 42% ku tiirsan tahay tamartaasi, taasoo bar kuma taal ka dhigaysa cunaqabataynta ay Ruushka saareen oo aysan tani weli ku jirin, iyadoo uu Ruushku dagaalkan ka faa’iidey inay tamartiisu u qaaliyowdo uun.
Previous article”Taasi ma dhici karto!” – MW Ukraine oo dayro weji gabax ah kala kulmay dhiggiisa Maraykanka (Muxuu ka codsaday?)
Next article”Xitaa ma lihin tiknolojiyad aan kula tacaalno!” – Maraykanka oo qirtay hub uusan u babac-dhigi karin oo uu Ruushku haysto (Daawo)